Worm KWAMAGUNDANE zivamile, futhi Lesi sifo siphatha kakhulu enjalo izifo izingane. Futhi ngokuvamile phakathi ukuhlolwa laboratory amasampuli sezinyawo Ascaris butholakala ingane. Yeka indlela okuyingozi ngempela lesi sifo? Ziyini izimpawu eziyinhloko?
Izikelemu Ascaris ezinganeni nezindlela ukutheleleka
Izikelemu - worm kunalokho enkulu yisinanakazana ezihlala esiswini womuntu. Kwake kwathi ngo-isimiso sokugaya ukudla bungene neqanda izibungu ezidala ukuthi ngemva umjikelezo eyinkimbinkimbi yentuthuko ukufinyelela esigabeni omdala. Ngosuku Insikazi ibekela amaqanda mayelana 100,000, okuyinto kanye sezinyawo nimkhiphele imvelo.
Yiqiniso, lesi sifo kungavuka uxhumane nomuntu ogulayo noma lapho enengxenye zokulala kanye okugeza izesekeli. Kodwa Ascaris kakhulu ingane umphumela nokungahlanzeki. Ngokwesibonelo, amaqanda helminth kungase ezinza esihlabathini, uma emva imidlalo ingane ingavumi ageze izandla zakhe, ematfuba ukutheleleka kuphezulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukutheleleka kungavuka ukusetshenziswa izithelo ezingahlanjiwe nemifino. Kwezinye izimo, ukulawula Vector kukhona amaphela nezimpukane.
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi izimuncagazi angawodwa ungumnikazi imikhiqizo waste isinyathelo ingane njengenhlangano allergen. Yingakho kusaqalwa zesifo sihambisana izimpawu ejwayelekile lokudakwa. Ngokuvamile izingane ezikhala ngezinhlungu ukukhathala, ukuphathwa ikhanda, umzimba nobuhlungu bomzimba. Izimpawu zesifo Ungahlanganisa imfiva, ukuvuvukala kobuso. Kaningi ascariasis kuholela ukuqubuka emzimbeni wengane.
Ngo ukuthuthukiswa izibungu Ascaris emaphashini, okuvame ukuholela ukukhwehlela ezinzima kanye nokuthuthukiswa ukucinana kwemigudu yokuphefumula.
kucabanga Okungalapheki kungaholela ekwandeni noma, Ngakolunye uhlangothi, wehlise ngesifiso. Ngezinye izikhathi izibungu wasigcina kwesibindi noma amanyikwe, ekhuthaza ukuvuvukala, ukubukeka of colic biliary futhi t. D.
Ngokwemvelo, lesi sifo abanakukwazi ukuhlanganyela emsebenzini kuthinta ukuziphatha nesineke. Ngempela, Ascaris umntwana ngokuvamile kuholela ukwehla ukusebenza esikoleni, izinkinga nigxile, kukhuphuke ukucasuka. Uma kuziwa ezinganeni ezincane, ithambekele babe nexhala ngokuvamile ukukhala, vuka ebusuku.
Kanjani ukubonisa izikelemu e ingane?
Yiqiniso, njengo nge isifo kusolwa kufanele axhumane ngokushesha ne udokotela. Kodwa kwaze kwaba kuphela ngemva ukuhlaziywa sezinyawo nezinye ucwaningo kungaba wafaka le uphethwe wokugcina futhi zibeka ukwelashwa.
Ngenhlanhla, namuhla kukhona inala izidakamizwa anthelmintic, okwasiza ngokushesha balahle lesi sifo. Njengoba isibonelo ingashiwo izidakamizwa ezifana "Vermoxum" futhi "Medamin". Ngokuvamile, ususe ngokuphelele ukutheleleka yisinanakazana ngezilinganiso ezanele.
Kuphela kwezinye izimo, ukubulala izinambuzane emathunjini isiguli ifaka ngamapayipi amancane lapho umoya-mpilo enikeziwe, njengoba izikelemu kakhulu ebucayi ukuze imiphumela yalolu igesi. Kodwa le ndlela yokwelapha sisetshenziswa kuphela emva ukwehluleka noma ukungakwazi ukusebenzisa ezivamile anthelmintics.
Kangakanani ngqi: izimpawu zokuqala nemiphumela
Yokupaka izinzwa ngeke kalula enze eziyinkimbinkimbi aqondisa ebumnyameni noma nge ukubuyekeza elinganiselwe
Isu nomholo phezu binaries. Kuyini iholo phezu binaries?